Aragtiwanaagsan.com – Wasiir Samsam …!!!Midhihii Kulmiyee…Abaarta lagaga baxay!!!!!
Wasiir Samsam …!!!Midhihii Kulmiyee…Abaarta lagaga baxay!!!!!
Aug 15, 2017 cabdicasiis mohamed Bogga Horumarka, Dhacdooyin, Qof Muhiim ah, Wararka, Waxbarasho 0
Wasiir Samsam:Wasiirka Maaliyadda Somaliland!!
Markii Xisbiga Kulmiye ee hadda talada hayaa Somaliland ka noqday Xisbul-xaakim,kadib kifaax iyo olole adag oo uu soo galay oo ay ku baxday awood badan oo dhaqaale iyo nafeedba.Waxa ka mid noqday nasiib wanaag golihiisii wasiirada ……Wasiir Samsam Cabdi Aadan oo markaasi loo magacaabay wasiirka waxbarashada,hadana Wasiirka Maaliyadda.Wasiir Samsam waxay muujisay dadaal iyo hawlkarnimo, qarul caadiya oo isdaba joog ah.Waxay noqotay wasiir isku xilqaama waxkasta oo baahiya ama tabasho ah oo ka jira gudaha Somaliland sidii loo soo gufeyn lahaa.waxay isa saartay masuuliyado faro badan oo ayna masuuliyadeeda lahayn laakiin garashadeeda iyo xilkasnimadeeda ay ku gartay in ay wanaagsantahay in la qabto.Waxay u hawlgashay in wasaaradda Maaliyadda dhaqaalaha soo gala qorsheyso oo ay nidaamiso oo ay ku maalgaliso hawlaha-qaranka iyo baahiyada dadka muwaadiniinta ah ee ay xaq tahay in la wax loo qabto.Wasiir Samsam waxay xoogga saartay soo xareynta dakhliga dawladdu ka dooneyso shacabka iyo ganacsadayaasha looga baahanyahay cashuuraha kala duwan.Wasiir Samsam waxay ka fiicnaatay oo ay anfac badatay masuuliyiin rag ah,oo qaranka xilal u haya oo aan hawlihii qaranka ee loo igmaday sidii loo baahnaa u gudan.waxay dadaashay intii waajibka ku ahayd iyo waliba in ka badan. Waxay noqotay laambad ay ku soo hirtaan dadka muwaadiinta ah ee masuuliyiintii ay codkooda ku doorteen,albaabada ka soo xidheen ama askarta ilaaladu u diiday in ay la kolmaan kuwii codkooda ay ku keeneen xafiisyada quruxda badan ee wasaaradaha Somaliland iyo kuwii ay muraayadaha ka dallacdeen xildhibaanadii ama wasiiradii ama agaasimayaashii ay soo doorteen. Waxay noqtay wasiir samsam wasiirkii ….Samafalka,Raja,faraxadda.!!!!waxay gaadhiga u raacday oo ay safar u gashay sidii ay u hawlgalin lahayd laamaha wasaaradda maaliyadda ee ay u soo kantarooli lahayd dakhliyada soo gala laamaha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda hoos yimaada. Waxay gaadhiga u raacday oo ay u safartay bari iyo galbeedba sidii ay dadka abaaraha iyo baahidu ku habsatay ee ku nool gobolada ay wax ugu soo tari lahayd ee ay wax ugu kordhin lahayd. Wasiir samsam waxay ku xaraaro baxdaa marka ay qof caawiso ee ay ka farxiso,halka wasiirada kale ku xaaro baxaan bunka ama qaadka marka ay ku dhuftaaan.wasiir Samsam todobaad kasta waxay joogtaa meel ama gobol hawl ay ka fulineyso.
Waxyaabaha ay caanka ku dahay wasiir samsam waxa ka mid ah:
• Dulqaadka hawlaha qaranka iyo ay u leedahay dadka kala duwan ee loo shaqeynaayo.
• Samofalka ay u fidineyso dadka reer Somaliland ee baahiya kala duwan leh.
• Dadaalka dheeraadka ah ee aan joogsaney ee 7 sanadood, ee ay xilka haysay kala joogsaneyn.
• Kor u qaadidda dakhliga cashuuraadka ee wasaaradda maaliyadda soo galaaya.
• Akhlaad iyo farxadda ay ku qaabisho dadka muwaadiinta ah ee rag iyo haweenba leh.
• Qodista iyo hirgalinta Ceelasha biyaha ee dadka ooman loo soo saaraayo.
• Ka faaiideynta wakhtiga ee ay tahay in qofka muwaadin ah loo shaqeeyo.
• Ka warhaynta dadka muwaadiinta ah ee ay tahay in laga warhayo,waxna loo qabto.
• Socdaalada dibadda ee ay u safrayso si ay horumarka dalka u sii kordho.
• U Qaybinta iyo u soo iibinta dadka muwaadiinta ah,dawooyinka,raashinka,gaadiidka iyo biyahaba ay baahida daran u hayso ee ay u ildaranyihiin!
Hadaba,iyadoo aynaan maqaalka ku soo koobayn hawsha fiican iyo dadaalka aan go’ayn ee ay qaranka u hayso wasiir Samsam,ayaa waxa run ah in iyadoo hadda lagu jiro in xukuumaddii ay ka tirsaneyn; wasiirkan lagu guuleystay ee Maaliyaddu ay dadaalkeedii waxqabad la dhammeysaneyso dawladda Madaxweyne Siilaayo ee imika sii dhamaanaayo wakhtigeedu.ayaa isweydiin leh,cidda bal xukuumadda soo socota u badali doonta …oo u buxin doonta meesha ay ku baneyneyso dadkii ay xilkaaasi iyo masuuliyaddaasi qaaliga ah u haysay??!!! Marka ay talada warejiso Xukuumadda Madaxweyne Silaanyo.ugu dambeyntii waxa run ah in wasiir Samsam gutay waajibkeedii iyo waxqabadkeedii dheeraadka ahaa…ee ay dadkeeda u fideysay iyadoon xilkii loo igmaday ku lumin wax aan waxtar u lahayn shacabka Reer-Somaliland!!! Waxana ay Wasiiraddu mudantahay in lagu maamuusho oo la xuso hawlaha waaweyn ee ay qaranka u soo qabatay oo aan marnaba la iska ilaawin.(Wasiir Samsam, waa midhihii kulmiye ee Abaarta lagaga baxay)!!
Qore:C.casiis Maxamed Yoonis(ansaari)
Macalin dhiga luuqadaha/Aqoonyahan School for English!
Warka Tv-ga Qaranka ee Danbe oo Dhan. Mon-28-Aug-2017.kh Riwaayad Qosol Leh Snap-chat Iyo Dhalinta Maanta | HD 2017